Otu esi eme Microsoft Office 2016 ruo mgbe ebighị ebi - VidaBytes | LifeBytes
Otu esi arụ ọrụ Microsoft Office 2016 ruo mgbe ebighi ebi
Netwọk dị na netwọkụ | | Office
Eleghi anya ị na -eche na ịgbalite faịlụ ahụ Microsoft Office 2016 Ọ dị mgbagwoju anya, mana anyị na -agwa gị na ọ dịtụbeghị mbụ otú ahụ. Ị nwere ike iji ụlọ ọrụ activator 2016 ngwa ngwa site na ụzọ dị iche iche. Agbanyeghị, tupu ịkọwa etu esi arụ ọrụ ya, ọ dị mkpa ibu ụzọ kwuo maka ya Microsoft Office 2016 na ihe ọ na -enye.
1 Kedu ihe bụ Microsoft Office 2016?
2 Kedu otu esi arụ ọrụ ụlọ ọrụ n'efu?
2.1 Usoro nke mbụ: ọkọlọtọ serial 2016 ọkọlọtọ na ọkachamara gbakwunyere
2.2 Ndepụta igodo ngwaahịa maka Microsoft Office 2016:
2.3 Igodo MS Office 2016:
2.4 Igodo ngwaahịa MS Office efu:
2.5 Igodo ngwaahịa maka Microsoft Office 2016:
2.6 Nọmba Oghere Usoro MS Office 2016:
2.7 Isi ngwaahịa ngwaahịa 2016 zuru ezu:
2.8 Usoro nke abụọ: rụọ ọrụ ụlọ ọrụ 2016 na -enweghị mmemme site na faịlụ .bat
2.8.1 Soro usoro ndị dị n'okpuru iji rụọ ọrụ Microsoft Office 2016:
2.9 Usoro nke atọ: site na KMS Pico
2.9.1 Nzọụkwụ iji budata ụlọ ọrụ 2016 activator zuru ezu:
3 Usoro nke anọ: ịgbalite Office 2016 Professional plus na ọkọlọtọ site na Ngwaọrụ Microsoft
3.1 Soro usoro ndị a ka ibudata na wụnye Ngwaọrụ Microsoft iji rụọ ọrụ Microsoft Office 2016
4 Esi mee ka Office 2016 rụọ ọrụ
5 Ajụjụ ndị a na -ajụkarị gbasara ịgbalite ọfịs Microsoft 2016
5.0.1 Ọ dị mma iji ọrụ ndị a rụọ ọrụ Microsoft Office.
Kedu ihe bụ Microsoft Office 2016?
Microsoft Office 2016 Ọ bụ ụdị nke nrụpụta Microsoft Office, mana ọ na -eme nke ọma ma Office 2013 na Office maka Mac 2011, wee buru ụzọ gaa Office 2019 maka nyiwe abụọ a.
Versiondị nke a Microsoft Office 2016 E gosiputara ya n'ọdịdị nlegharị anya kpamkpam yana arụmọrụ ọhụrụ yana ọhụhụ ka mma. N'ime akụrụngwa ya kacha eji eme ihe ị ga -ahụ: Okwu, Excel, PowerPoint na Outlook.
N'isiokwu a, ị ga -enweta ozi niile dị mkpa budata Office 2016 32 ibe n'ibe n'asụsụ Spanish zuru oke yana serial yana ibudata Office 2016 64 ibe n'ibe n'asụsụ Spanish zuru oke yana serial. Cheta ibudata naanị ngwugwu dakọtara na nhazi kọmputa gị.
Kedu otu esi arụ ọrụ ụlọ ọrụ n'efu?
Ọ bụrụ na ịmaghị etu esi etinye na mee ka Microsoft Office rụọ ọrụ n'efu, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị, na nkuzi a, ị ga -enweta ozi niile dị mkpa site na nkwụsị.
Taa enwere ọtụtụ, ọtụtụ ụzọ iji rụọ ọrụ ụlọ ọrụ n'efu mana ma eleghị anya ọ bụghị ihe niile ga -arụ ọrụ. Ụfọdụ akwụsịla ịrụ ọrụ ma ụfọdụ ekwekọghị n'otu sistemụ arụmọrụ. Agbanyeghị, ebe a anyị na -ewetara gị ụzọ anọ na -arụ ọrụ n'ezie ma dịkwa ugbu a.
Usoro nke mbụ: ọkọlọtọ serial 2016 ọkọlọtọ na ọkachamara gbakwunyere
Nke mbụ n'ime ụzọ ndị a gafere igodo ngwaahịa na nke a abụghị ihe karịrị otu mkpụrụedemede mkpụrụedemede iri abụọ na ise. Ụfọdụ igodo ngwaahịa maka Microsoft Office 2016 ha na -enwekarị agwa. Igodo a ga -adabere n'ụzọ i siri nweta ya. N'okpuru ị ga -ahụ ndepụta igodo ngwaahịa maka rụọ ọrụ Microsoft Office 2016:
Ndepụta igodo ngwaahịa maka Microsoft Office 2016:
Igodo MS Office 2016:
Igodo ngwaahịa MS Office efu:
Igodo ngwaahịa maka Microsoft Office 2016:
Nọmba Oghere Usoro MS Office 2016:
Isi ngwaahịa ngwaahịa 2016 zuru ezu:
Iji igodo ndị a rụọ ọrụ, ị ga -ebu ụzọ tinye ya. Ọ bụrụ na ị wụnyebeghị ya, nke a bụ oge kacha mma ime ya. Nke abụọ, ozugbo etinyere ya, ị ga -ebido ọrụ ya ọ bụla, ana m akwado okwu. Mgbe nke a gasị, mgbe ịmalitere ọrụ, ọ ga -ajụ gị ozugbo maka ekwentị Oghere Usoro ngwaahịa na n'ụzọ dị otu a ị nwere ike rụọ ọrụ ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ jaghị, soro usoro ndị a:
Pịa na nchekwa ma họrọ akaụntụ.
Chọta nnọkọ ahụ «Igodo ahia»Pịa ya.
Tinye igodo ngwaahịa ka rụọ ọrụ Microsoft Office ma gosi okwuntughe.
Ozi ga -apụta na -ekwu «Ejirila Microsoft Office 2016 n'ọrụ». N'ụzọ dị otú a, ị ga -enwe ngwugwu gị Microsoft Office 2016 na -arụ ọrụ na ị ga -enwe ike ịtụkwasị ọrụ ya niile obi.
Ọ bụrụ na usoro a arụghị gị, mana ị ka chọrọ rụọ ọrụ Microsoft Office 2016, na -agụ usoro ndị ọzọ.
Usoro nke abụọ: rụọ ọrụ ụlọ ọrụ 2016 na -enweghị mmemme site na faịlụ .bat
Usoro a dịtụ nfe mana ọ dị irè maka rụọ ọrụ Microsoft Office na -enweghị mmemme yana na -enweghị igodo ngwaahịa. Ọ na -agụnye ime faịlụ .bat nke ejiri koodu tinye na mbụ iji mejuputa faịlụ Malite Microsoft Office 2016.
Soro usoro ndị dị n'okpuru iji rụọ ọrụ Microsoft Office 2016:
Detuo koodu na-egosi na webụsaịtị a. (https://www.miblocdenotas.com/279692)
Na desktọpụ PC gị, pịa aka nri wee mepụta akwụkwọ ndetu ọhụụ.
Tapawa koodu ị depụtaghachiri na mbụ wee chekwaa dọkụmentị ahụ dị ka «activator.cmd»Ị ga -etinyerịrị akara ngosipụta n'aha ka echekwaa ya nke ọma.
Gbaa faịlụ ahụ activator.cmd ma ka m mee ihe Malite Microsoft Office 2016.
Ọ bụrụ na ị ruru ebe a wee soro usoro niile, mgbe ahụ ị kwesịrị inweworị Microsoft Office 2016 arụ ọrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe na ịgbalite emezughị, ana m akwado ka ị gaa n'ihu na -agụ usoro ndị ọzọ.
Usoro nke atọ: site na KMS Pico
para mee ka Microsoft Office 2016 rụọ ọrụ ma nwee ọ enjoyụ n'ọrụ ya, ịnwere ike iji ngwa ahụ Ọnụahịa kasị elu nke KMS. Ngwaọrụ a dị mfe iji ma rụọ ọrụ nke ọma iji mee ka ọfịs rụọ ọrụ n'ụdị ọ bụla. Ọnụahịa kasị elu nke KMS es ụlọ ọrụ activator 2016 Nke kachasị tụrụ aro, a na -ewerekwa ya dị ka patch kacha ike maka ọfịs mgbawa 2016.
Ị nwere ike budata KMSPico site na ibe gọọmentị ya, ka ị nwee ike ijide n'aka na ị na -ebudata ma wụnye ụdị ukara nke KMSPico ime ọfịs 2016.
Nzọụkwụ iji budata ụlọ ọrụ 2016 activator zuru ezu:
Budata ụlọ ọrụ KMS Activator 2016.
Mepee faịlụ .exe ebudatara ma gbaa mbọ mechie ọrụ niile Microsoft Office 2016.
Ozugbo mmemme ahụ na -ebu ibu, pịa akara ngosi Microsoft Office 2016 na usoro nchaji ga -amalite. Ọ baghị uru ụdị nke ya Office 2016 na ị wụnyela, agbanyeghị, ọ ga -arụ ọrụ nke ọma. Ị nwere ike wụnye Ọkachamara Microsoft Office 2016 yana 2016 o Ụkpụrụ Microsoft Office 2016.
Mgbe nke a, ngwugwu gị Office 2016 ga -arụ ọrụ nke ọma na Microsoft Office 2016 KMSPico activator ọ ga -arụ ọrụ ya.
Chọpụta na Malite Microsoft Office 2016 emeela nke ọma. Mepee ọrụ Office 2016, pịa faịlụ, wee họrọ akaụntụ.
Na Ozi ngwaahịa ozi ahụ kwesịrị ịpụta Ngwa emegharịrị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ nwere ihe mejọrọ, ana m akwado ka ị nwaa usoro a ọzọ.
Ọ bụrụ na mgbe mbọ ọzọ gachara, ị nwebeghị ike mee ka ngwaahịa gị malite Microsoft Office 2016, Ana m akwado ka ị jiri usoro ndị a.
Usoro nke anọ: ịgbalite Office 2016 Professional plus na ọkọlọtọ site na Ngwaọrụ Microsoft
Usoro a yitụrụ nke ukwuu KMS Pico maka ọfịs 2016 mana ọ bụ nke kachasị ọhụrụ ma nwee njiri mara enyi. Ngwaọrụ Microsoft bụ aha ngwa a ga -enyere gị aka rụọ ọrụ Microsoft Office 2016. Ka ọ dị ugbu a, nke a bụ naanị ngwa ọrụ dị irè nke na -eme nke ọma mgbe niile 100%. Ọ bụ n'efu, dị mfe iji, yana enweghị nje, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị.
Ngwaọrụ Microsoft tupu amara ya Onye na -arụ ọrụ EZ ma mebere ya na 2010 site n'aka onye isi otu Ndụ Dijitalụ M. Ngwaọrụ a na -arụ ọrụ nke ọma ọnọdụ anọghị n'ịntanetị, yabụ na ịgaghị achọ ịntanetị iji mee ka Office 2016 gị rụọ ọrụ.
Iji jiri ngwa a, ị ga -ebu ụzọ Gbanyụọ antivirus gị nwa oge. Nke a bụ n'ihi na onye na -eme ihe bụ patch nke ga -agbanwe koodu nke ngwugwu Office 2016 gị wee si otú a rụọ ọrụ ya. Echegbula, mgbe nke a gasị, ị nwere ike rụọ ọrụ antivirus gị ọzọ wee gaa n'ihu na -echedo nzuzo gị.
Soro usoro ndị a ka ibudata na wụnye Ngwaọrụ Microsoft iji rụọ ọrụ Microsoft Office 2016
Download Ngwaọrụ Microsoft site na peeji nke gọọmentị ya.
Wepu faịlụ ahụ Ngwaọrụ Microsoft.rar na ibudatara. Okwuntughe maka faịlụ .rar bụ "ukara-kmpico.com”. Mgbe nke ahụ gasị, mepee faịlụ Ngwaọrụ Microsoft.exe ịmalite usoro ihe omume.
Ị ga -ahụ igbe ọrụ nwere akara Office na Windows na enyo. Họrọ akara Office ka ịga n'ihu.
Window mmapụta ọhụrụ ga-apụta yana ọtụtụ nhọrọ agụnyere. Pịa na taabụ Tinye n'ọrụ wee pịa EZ- Onye na-eme ihe. Usoro a ga -ewe sekọnd ole na ole iji wuchaa.
Mgbe nke ahụ gasị, ị ga -ahụ windo ozi na -ekwu nke ahụ Office 2016 na -arụ ọrụ.
N'ụzọ a, ngwungwu Office 2016 gị ga -arụ ọrụ na -adịgide adịgide. Iji lelee ọnọdụ ngwaahịa gị, bido ọrụ Office 2016, pịa Njikwa> akaụntụ> site n'ebe ahụ ị nwere ike ịhụ ozi ahụ Ngwa emegharịrị.
Ọ bụ ya, n'ụzọ a ị nwere ike rụọ ọrụ ụdị nke ọ bụla Microsoft Office na -adịgide adịgide. Ọzọkwa, a na -eji ngwa a rụọ ọrụ nsụgharị Windows.
Esi mee ka Office 2016 rụọ ọrụ
Site na vidiyo a dị mfe, ị ga -amụta n'ụzọ dị mfe ịgbalite Office 2016 emelitere.
Ajụjụ ndị a na -ajụkarị gbasara ịgbalite ọfịs Microsoft 2016
Ọ dị mma iji ọrụ ndị a rụọ ọrụ Microsoft Office.
Ee, n'ezie, ime ka Office rụọ ọrụ site na nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a bụ nchekwa na nchekwa 100%. Agbanyeghị, ị ga -emerịrị usoro niile egosipụtara iji hụ na usoro gara nke ọma.
Kedu ihe m ga -eme ma ọ bụrụ na ikikere ga -agwụ mgbe obere oge gachara?
Ọ bụrụ na mgbe obere oge gachara, ikike ga -agwụ ma ghara inye gị ohere iji ọrụ niile, ọ bụ oge iji ihe nrụpụta ọzọ. Ana m akwado ka ị jiri usoro nke Ngwaọrụ Microsoft na -ekwe nkwa ịdị irè n'ịrụ ọrụ gị Microsoft Office 2016.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Office » Otu esi arụ ọrụ Microsoft Office 2016 ruo mgbe ebighi ebi
Ọdịdị sava ndị ahịa na nkọwa data!
Gịnị bụ middleware? Akụkọ, ngwa, na ndị ọzọ